Ezokuxhumana Blight | Martech Zone
NgoLwesithathu, Februwari 13, 2008 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Isisho esidala semithombo yezindaba efinyelela kabanzi ukuthi izinhlamvu zamehlo = imali. Umqondo onamaphutha owamukelwa ngokuvamile namuhla yilokho Okuningi izinhlamvu zamehlo = Okuningi imali. Sibona izingosi zokuxhumana nabantu njenge Digg, MySpace futhi Facebook ithafa futhi lincipha ekubambeni iqhaza.
Nginesiqiniseko sokuthi wonke lawa masayithi azobuyela emuva futhi akutshele ukuthi ayakhula enanini le- amashiya. Lokho empeleni hhayi izindaba ezimnandi. Uma ukubamba iqhaza kucwecwe ngamathafa noma kukhalelwa futhi nenombolo yabasebenzisi iyakhula, kunomyalezo ezibalweni! Umsebenzisi ojwayelekile usebenzisa isikhathi esincane… noma inani elandayo labasebenzisi bayayilahla insiza ngokuphelele.
Isilingo sokukhula sihlale sikhona… izinhlamvu zamehlo eziningi zingaletha imali eningi. Kodwa-ke, ingozi yesikhathi eside yama-eyeballs amaningi ingakungcwaba ukuthandwa kwesayithi lakho, noma yenze kube yithagethi enkulu ye-SPAM. Lezi zingosi bekufanele ngabe zihlakaniphe kakhulu ekuhlaziyweni kokukhula kwesiza sazo uma kuqhathaniswa nomthelela kubasebenzisi abakhona. Ukube benze kanjalo, kungenzeka ukuthi bathola ukuthi, ukukhulisa inzuzo, bekukhona i- usayizi wesokudla kusayithi labo ukuze bangadluli ngaphezu kokuqhubeka nokufuna ukukhula.
I-Urban Blight = I-Social Media Blight
Inkinga iyisisekelo esihle, yinkinga yasemadolobheni. Ngenkathi ngihlala ePhoenix, e-Arizona unyaka wonke ngafunda okuningi ngokulimala emadolobheni okwakwenzeka. Emuva ngasekupheleni kweminyaka yama-80s, amadolobha asePhoenix ayekhula ngesilinganiso esidinga kakhulu, kangangokuba akekho noyedwa owayekwazi ukuhambisana nomongo - wedolobha. Njengoba izindawo zazigcwele ngokweqile nomgwaqo uthuthuva, abantu bathuthela ezindaweni ezintsha.
Lezi zindawo ezintsha zazinezikole ezintsha, amakhaya amasha, umhlaba omningi nezihlahla, nomakhelwane abakhulu - ingasaphathwa eyomoya ohlanzekile nendawo eningi yokuhamba. Ususondele komakhelwane bakho… ngoba bebengena bephuma bengena ngaso sonke isikhathi… behambela imicimbi yomphakathi futhi bekhuluma ngocingo.
Kusetshenziswe kuSocial Media, ngikholwa ukuthi sibona kwenzeka into efanayo. Umnyombo weDigg ubhekene nokulimazeka njengamanje - abasebenzisi abasize ukudala insizakalo edume kakhulu sebeyaxoshwa futhi bafuna ezinye izindlela. Nge-MySpace, impendulo kwaba yi-Facebook. Manje i-Facebook isikhule kakhulu njenge-MySpace futhi amathafa afanayo ayenzeka - kulokhu ngejubane elisheshayo.
Bayaphi bonke? Ngicabanga ukuthi impendulo ukuhlaselwa kwe- ama-micro-network ziyavela. Abantu bashiya idolobha baphuma baya emadolobheni.
IMHO, lezi yizindaba ezinhle kubathengisi. Kusetshenziswa amasu wokukhangisa asuselwa ebanzi afinyelela ezinhlamvini zamehlo eziningi (kodwa abathengi abancane) kuya ngokuya kungathandeki. Ukuthola amasayithi amancane ahlangabezana niche ofisa ukuyifinyelela sekuya ngokuya kuthandwa kakhulu. Ngokwami, ngithola ukucela okuningi okuningi kwimali engenayo yokukhangisa yamasayithi we-niche engiwasebenzisayo Ama-Navy Vets.
Isikhathi esichithwe kusetshenziswa imikhankaso yokukhangisa kuwo wonke lawa masayithi kungenza umehluko ezindlekweni ze-ol 'nje i-batch nokuqhuma Amasu, noma kunjalo. Ukudoba nge-dynamite kwakulula, kepha kukhombisa ukuthi kuyindlela eyingozi kwi-Intanethi. Lokhu kudinga ukuthi abathengisi bashintshe amaqhinga abo, abadinge ukuthi basebenze kanzima emyalezweni ofanele ngesikhathi esifanele - kanye nokwakha ubukhona obuhle kwi-inthanethi obunedumela elivelele.
Akekho owathi kuzoba lula!
Tags: blightIzilwane zasolwandlesocial mediaamanethiwekhi omphakathi
Ividiyo> = Izithombe + Izindaba
Imithombo yezokuxhumana ibhizinisi elingalindelekile kakhulu. Amawebhusayithi amaningi afana ne-MySpace noma i-FaceBook akhomba abantu abasha futhi njengoba sonke sazi ukuthi lolu hlobo lwezithameli lungashintsha ukunambitheka kwabo ngokushesha okukhulu.
Uyayikhumbula iGlobe? Inethiwekhi yokuqala yokuxhumana nomphakathi - "i-dotcom bubble" eye yaba ukufinyelela kwezigidi ezingama- $ 200 futhi yalahlekelwa yikho konke ngosuku olungu-1.